कर्मियों को नाम को सूची। लाल सेना को कर्मियों को सूची
लाल सेना को इतिहास र हाल सम्म कर्मियों को सूची एकदम गैर-सार्वजनिक जानकारी थिए। सोभियत संघ गरेको सशस्त्र शक्ति को दन्त्यकथा बाहेक विजय आनन्द र हार को तीता सिकेका छन्।
अन उर्दी लाल सेना को स्थापना को Cheka को राजनीतिक प्रहरी को गठन पछि जनवरी 1918 मा वी आई Leninym हस्ताक्षर भएको थियो। सैन्य शक्तिहरू कर्मियों को सूची कार्यकर्ता, सैनिक र नाभिकहरु, जो Bolsheviks गर्न भन्दा गए शामिल गर्दा।
नयाँ सेना क्रांति रक्षा गर्नुपर्छ किनभने यी शक्तिहरू सबै विरोधीको, छैन हटाउन सकिएन। को मजदुर किसान - सेना मात्र भइरहेको सक्छ दुई सिफारिसहरू वर्ग हुनुहोस्। सैन्य अनुशासन को कमी, आदेश को चर्चा, अधिकारीहरु को चुनाव - यो मार्क्सवादी Canon लागि स्वैच्छिक आधारमा गठन भएको थियो। लेनिन नियमित सेना आवश्यकता देख्न गर्नुभयो। तसर्थ, tsarist सेना प्रतिस्थापन गर्ने मिलिशिया आए।
यस समयमा गृहयुद्ध मात्र कठोर र सेना को प्रशिक्षण आवश्यकतालाई बस स्पष्ट थियो।
1926 मा एक पुस्तक जो कार्यकर्ता 'किसान' सेना को कर्मियों को एक नाममात्र सूची समावेश प्रकाशित भएको थियो। यो मूल डेटा, जन्म र मृत्यु को मिति समावेश गर्दछ।
तर 1918 को बीचमा 18 40 वर्ष, र विश्वव्यापी सैन्य प्रशिक्षण देखि काम मानिसहरूलाई विश्वव्यापी सैन्य कर्तव्य शुरू देखि, अधिकारीहरु को चुनाव रद्द, र सैनिक सपथमा लिन। पैदल, तोप, cavalry, Armored सेना, 200 Armored वाहन र दुई Armored रेल को निर्वाचकगण: श्रम सेना गठन गर्न थाल्छन्। Kovrov शहर मा पहिलो सोभियत KB स्वचालित हतियार देखिन्छ।
नियमित सेना समय को सक्रिय निर्माता युद्ध व्यवसायीक द्वारा संग व्यवहार गर्नुभयो पर्छ भनेर विश्वास लियोन Trotsky थियो।
रूसी साम्राज्य प्रसिद्ध जंगी जहाज "Potemkin" काला सागर बेडा साथ सशस्त्र थियो। Mensheviks, समाजवादी-क्रांतिकारियों र anarchists को एक विशाल संख्या मा टीम को उपस्थिति संकेत कर्मियों को सूची। नाभिकहरु विद्रोह पनि रूस मा क्रान्तिको पहिलो प्रयास मा भयो, तर यो हार मा समाप्त भयो। कारण धेरै थिए। यो पनि बस अस्ट्रिया र जर्मनी ले अभिभूत आप्रवासी छन् जो कर्मियों र काला सागर बेडा अन्य जहाज बाट समर्थन को कमी सूची।
वास्तवमा लाल र शाही सेना बीच मौलिक मतभेद थिएन। तिनीहरूले कहिल्यै XIX सताब्दी को दोस्रो आधा देखि मा सुधार प्रयासको Miliukov आधारित थिए। सैन्य जिल्लामा मा देश को विभाजन को सिद्धान्त र हालसम्म केही परिवर्तन संग संरक्षित गर्ने conscript सेना।
रूस सधैं एक सेना ठूलो यो समावेश गर्न सक्षम थियो भन्दा छ चाहन्थे छ। यो प्रवृत्ति देश को इतिहास मार्फत लगाया जान सक्छ। लाल सेना को कर्मियों को सूची सधैं overblown गरिएको छ, तर व्यवहार मा, शत्रुता को प्रकोप संग, त्यहाँ लड्न कुनै एक थियो।
सेना को नेतृत्व विशेष यांत्रिक housings stalin सिर्जना आवश्यक सामान्य कर्मचारी जी K. Zhukov को नयाँ प्रमुख आफ्नो memoirs मा लेखे।
यस समयमा, सैन्य कर्मियों प्रदान गर्न सैन्य ट्यांक, तोप विद्यालय र अन्य शैक्षिक संस्थाहरु खोल्न सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। 21 ट्यांक ट्यांक विद्यालय र प्रतिष्ठान सोभियत संघ खुलेको थियो। एउटै बाध्य प्रशिक्षण फ्लिट र तोप सेना मा स्थान लियो।
हतियार मा द्वितीय विश्व युद्ध को शुरुवात मा, त्यहाँ 1.5 लाख मान्छे थिए। र आफूलाई पनि जारी गर्ने ट्यांक पछि LAG थिएन।
तर पैदल को प्रशिक्षण र गतिशीलता बिना, तिनीहरूले अप्रभावी थिए र लाल सेना आवश्यकता जो जर्मनी को आक्रमण कारण थियो गहिरो रणनीतिक सञ्चालन, सञ्चालन गर्न अनुमति थिएन।
पनि सबैभन्दा पेशेवर कर्मचारी पैदल बिना battlefields मा असहाय थिए।
Ensigns र कप्तान - को tsarist सेना सैन्य तल्लो तहहरू - नयाँ सैन्य विचार गठन गर्न सकेनौं। घोडचढी, एक rudiment रूपमा, दोस्रो विश्व युद्ध को अन्त सम्म लामो थियो। लाल सेना बस Colossal सम्पूर्ण इतिहास मा कर्मियों irretrievable घाटा को सूची।
पहिलो विजय र पराजय
फिनिश युद्ध जर्मन कमजोर लाल सेना स्थानहरू देखाए, तर पनि सोभियत रणनीतिकारों त्यो कुरा सिके। 1940 को गर्मी मा त्यहाँ युद्ध आवश्यक छ मात्र के तालिम गर्न सैन्य obliges जो रक्षा को कर्मचारी Commissar Semyon Timoshenko, मा आदेश सूची छ। यो एक क्रमिक फिर देखि हथियारबंद होना, हतियार र थप शक्तिशाली ट्यांक, हतियार को सिर्जना नयाँ मोडेल, मार्फत तोड्न जो सकिएन न समय मा एक बन्दूक सुरु हुन्छ।
सबै दोष 1941 मा लाल सेना को स्थितिहरु को अधिकता को हानि देखाए, र अगाडि लाइन मास्को नजिक रही थियो। तर यो Wehrmacht मार्फत तोड्न व्यवस्थापन भएन।
सोभियत संघ को हात र मा चिसो थिए, र सुसज्जित लागि गर्मी जर्मन आफ्नो खराब हस्तान्तरण। आफ्नो बन्दुक को चिसो मा पनि, तिनीहरूले एकदम परिचालित थिए। डिसेम्बर 1941 मा, लाल सेना 300 मी लागि शत्रु चलाए। त्यसैले म राजधानी सुरक्षित गर्न व्यवस्थित। यो विजय को नैतिक महत्त्व भारी थियो, र सोभियत आदेश फेरि आक्रामक क्षमताहरु सैन्य लडाई निकास र जर्मन सेनाले निकास हुनबाट टाढा थिए overestimated छ।
1942 लाल सेना गरेको अग्रिम को वसन्त मा रोकियो, र दक्षिण थप धेरै प्रमुख हराइदिन्छ स्थिति बढन। Kharkov, कीव नजिकै यो लड र अधिक हस्तान्तरण र सिम्फरोपोल को रक्षा। जर्मनी को काकेशस, को KUBAN र Stalingrad गर्न बाटो खोलेको छ। ज्ञात stalin "एक कदम छैन फिर्ता" थप "साफ" सोभियत संघ को सशस्त्र सदस्यहरू को सूची आदेश दिए।
यो धरती कक्षा मा पहिलो उपग्रह थियो
Kievan अवस्थामा ख्रीष्टियन को उद्भव
Valide Safiye सुल्तान: जीवनी, इतिहास, छोराछोरी, र रोचक तथ्य
1812 को युद्ध (सूची) को हीरो
विधि र इतिहास अध्ययन को स्रोतहरु। "ऐतिहासिक तथ्य" कसरी प्राप्त गर्न?
प्रारम्भिक 20 औं सी मा युवा इतिहास
बोसो छैन, मांसपेशी बढ्न क्रममा खान के: मांसपेशिहरु को एक सेट लागि आहार
"Snowy उल्लू" (जेल)। रूस मा विशेष जेल शासन
पुरातन Basilica Cistern - को Byzantine साम्राज्यको पैतृक
भविष्यमा प्रकोप यो - सपनामा एक बाढी: के सपना पुस्तक गर्छ?
Multivarka मा आलु को लागि एक सरल नुस्खा
बधाई अभियोजन पक्ष
सौन्दर्य के हो?
बुना कंबल - सान्त्वना आफ्नै हातले सिर्जना